प्रचण्ड र माधवकुमारबीच पद बाँडफाँट नेपाल अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने – Dainik Sangalo
प्रचण्ड र माधवकुमारबीच पद बाँडफाँट नेपाल अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने
November 25, 2020 467
काठमाडौं सत्तारुढ नेकपाको विवाद अहिले स्थिर अवस्थामा छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ल्याउने राजनीतिक दस्तावेजको पर्खाइमा नेकपा रहेको छ । यही मंसिर १३ गते बस्ने सचिवालय बैठकमा ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा लगाइएको आरोपको खण्डनसहित दस्तावेज ल्याउने तयारीमा छन् ।
यसबारे यही मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले जानकारी दिएका थिए । गत कात्तिक २८ गते प्रचण्डले पेस गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा ओलीमाथि विभिन्न आरोप लगाइएको छ ।
आरोपप्रत्यारोपपछि अब बस्ने सचिवालय बैठकमा पेश हुने ओलीको प्रस्ताव र त्यसपछि दुवै पक्षबाट जनाइने प्रतिक्रियाले नेकपाको एकताको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले मंसिर १३ पर्खाइमा रहेको छ ।
सो बैठकको ओली पक्षधर र प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल पक्षधरहरुको रणनीति तय गरिरहेका छन् । प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई एक पद छाड्न लगाउने रणनीतिमा पुगेका छन् भने ओली समूह प्रचण्डलाई प्रस्ताव फिर्ता गराउने तयारीमा पुगेका छन् । यसबारे दुवै समूह छलफलमा रहेका छन् ।
पार्टीको नीति र निर्णयअनुसार ओलीले प्रधानमन्त्री र अध्यक्षमध्येबाट एक पद छाड्नु पर्ने अडानलाई चट्टानी बनाउने प्रचण्ड–नेपाल समूहको तयारी छ । यसअघि ओलीलाई एक पद छाड्ने लगाउने अडानबाट प्रचण्ड पछि हटेको भन्दै अब पार्टीको नीति र निर्णय स्वीकार्नु पर्ने ओलीको पालो रहेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको बुझाइ छ ।
ओलीले ल्याउने प्रस्ताव र प्रचण्डको प्रस्ताव तथा नेताहरूका धारणा समेटेर एउटा साझा प्रस्ताव ल्याउने एक विकल्पको रुपमा लिएको प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीले दुईमध्ये एक पद छोड्ने अथवा दुवै प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीसम्म लगेर त्यहीँबाट छिनोफानो गर्नेलगायत विकल्प तय गरिरहेका छन् ।
यही ओलीले अध्यक्ष छोडे नेता नेपाल अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री छोडे प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिसमेत प्रचण्ड र नेपालबीच भएको छ । तर, दुवै पद ओली नछाडे त्यसपछि अन्य कदम चाल्ने तयारीमा प्रचण्ड–नेपाल समूहको छ ।
यद्यपि दुवै समूह अहिले विभिन्न विकल्पमाथि आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेका छन् । मंगलबार बालुवाटार, खुमलटार र कोटेश्वर निवासमा आफ्ना समूह र निकट नेताहरुसँग ओली, प्रचण्ड र नेपाल छलफलमा जुटिरहेका थिए । बालुवाटारभन्दा खुमलटार र कोटेश्वर निवास मंगलबार निकै व्यस्त देखिएको थियो । बुधबार पनि नेताहरु छलफलमा जुटिरहेका छन् ।
हेर्नुहोस् प्रचण्ड-नेपाल पक्षले प्रकाशन र सार्वजनिक गरेको बूकलेटमा ?
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र देखिएको विवादमा नयाँ मोड सिर्जना भएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले सचिवालयमा छलफलका लागि आएका डकुमेन्टहरू प्रकाशित गरेर नेता कार्यकर्तालाई बाँड्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका केपी शर्मा ओली पक्षका नेताहरूले विरोध गरेका छन् ।
प्रिन्ट भएको बूकलेटमा गत कात्तिक २२ गते अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठक आह्वान गरेको पत्र शुरूमा राखिएको छ ।
त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिएको जवाफ, प्रचण्डले ओलीलाई दिएको प्रत्युत्तर र प्रचण्डले सचिवालय बैठकमा पेश गरेको ओलीमाथिको आरोपसहितको प्रस्ताव रहेको छ । ‘पार्टी एकता र निर्माणको आधार’ नाम दिइएको बूकलेट प्रकाशित भएर वितरण शुरू गरिसकिएको छ ।
सचिवालय बैठक आह्वानदेखि चलेका पत्र र प्रस्तावका सिलसिलामा एक पक्षले अर्को पक्षको पोल खोलाखोल गरिएको छ । गत मंसिर ३ गते बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डको प्रस्तावको जवाफ दिनुपर्ने भएकाले १० दिन समय लाग्ने बताएका थिए ।
Prevभोलिदेखि फेरि लकडाउन गर्ने निर्णय : बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका यी क्षेत्र बन्द हुने !
Next‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली भ्रष्टाचारका आरोपी सहकर्मीको प्रतिरक्षामा आफैँ उत्रिन्छन्’
अन्जु पन्तले रुदै रुदै गाइन आफ्नै कथामा आधारित गीत ‘हेर्नुहोस’
आफ्नो पाटी फुटेपछि यिनी हरु हाम्रो पाटी फुटाल्न जुटेका छन् ; सभापति देउवा
लकडाउनमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने हजार सवारीसाधन कारबाहीमा
साँझ भएको बस दुर्घटनामा परी घाइते मध्ये तीन जनाको मृत्यु
दुखको खबर !! अनिताको अप्रेशन सफल हुन सकेन अब के होला ? बिनोद रुदै मिडियामा आए (50464)
माधव नेपालसहित चार नेतामाथिको कारबाही फिर्ता लिएपछि यसो भन्छन् रावल